Barcelona Iyo Real Madrid Oo Lees Raaciyay
Spain-April 25-2012-xiddigaha.com-Saaxiibayaal qubanaheena ciyaaraha waxeynu ku falaqeynenaa horyaalka qaaradda yurub(UEFA) oo Semi Finalkii la soo gabagabeeyey.
Barnaamijyadeenii hore aynu ku soo qaadaney afartii wadan ee iskugu soo hadhey Semi finalka waxaana shaley afka ciidda loo darey Bacelona oo difaacanweydey koobka waxaana galabta loogu darey Real Madrid ee maxaa si ka noqdey isbaanishka.
Haddaba Akhyaartaay waxaa shaley nasiib looga badiyey Barcelona oo dhayalsaneysey Chelsea,laakiin ciyaarta galabta dhacdey ee dhexmartey Bayern Munich iyo Real madrid ayaa ka duweney tii shalay dhacdey.
Ciyaartan oo runtii la wada sugayey waxaa ka soo qeyb galay dadweyne aad u tiro badan iyo taageerayaasha labada wadan oo ciyaarta taagni iyo sawaxan ku dhameystey.
Haddaba haddii aynu u soo noqonq ciyaarta waxay ku bilaabantey caajis iyo labada kooxood oo aad u kala baqayey aqhaydna ha itaaban kuma taabanaye oo runtii umaddii daawaneyseyna haamaansigu ka batey.
Qeybtii hore ee ciyaarta Real Madrid waxaa u suurtoobey iney dhashadaan goolkii ugu horeeyey Ronaldo daqiiqadii 6-aad,goolkii labaadna u raaciyey daqiiqaddi 14-aad,Robben ayaa u jawaabey daqiiqaddii 27-aad ciyaartuna waxa ku soo af shubatey90-daqiiqo ee loogu tala galay ciyaarta Bayren Munich -1- Real Madrid-2-.
Bacdamaa lugtii hore ee lagu ciyaarey Germany waxaa -1- iyo -0- ku soo badaiyey Bayern,galabtana Real ay ku badisey 2-1-koox walba waxay la hoyatey min 3-ex dhibcood waxaana loogu darey 30-don daqiio waxabana iskamey dhalin,sida caadadu ahayd waxaa loo djigey min 5-an Rigoore Bayern Munich ayaa ku badisey-3-2.
Mucjisada ciyaartan ka dhacdey waxey ahayd markii labada xiddig ee ka mid ah kuwa aduunka ugu fiican ay cuneen rigoorayaasha waa Ronaldo iyo KaKa,Saaxiibayaal waxanu eegnaaba waa Bayren Munich iyo Chalsea meesha ay iskala soo baxaan haddii eebe ka dhigo.